Izibonelelo ezi-6 ze-Twitter zokuKhuthaza iBrand yakho | Martech Zone
Zininzi iindlela zosasazo lwasentlalweni kunye neetekhnoloji zeteknoloji phaya zithetha ngokuphela kwe-Twitter. Ndiyakuthembeka ukuba, ngaphandle kwengxolo yeshishini, ndisafumana ixabiso elincomekayo eqongeni. Ukuba umntu ovela ku-Twitter ufunda le, nantsi into endiya kuyenza kwangoko ukuphucula iziphumo zeshishini:
Yenza abasebenzisi bahlawule ii-tweets ezizenzekelayo. O-ndiyasiva isikhalo ngoku, kodwa ukuba besifikeleleka, ndingabhatala ukukhuthaza umxholo wam ngoomatshini abazisebenzelayo. Kwaye ndingonwaba ukuba abo bathumela imiyalezo baya kulishiya kwangoko iqonga. Ukugxekwa okuzenzekelayo ku-Twitter kuxhaphakile kuba kusimahla… asikho esinye isizathu.
Yandisa ukugxila kumgangatho kunye nokuhambelana nokukhula. Andikho kuTwitter ukulandela abantu abadumileyo… Ndikhona ukukhuthaza, ukunxibelelana nokunxibelelana nabantu endibakhathaleleyo. Nantsi i-tweet eshwankathela iimvakalelo zam:
Uphi "Yeka ukucebisa ukuba ndilandele iqhosha laseKardashian" @kwi_twitter? Cc @ Inkxaso
- Douglas Karr (@kwenze_k) Matshi 28, 2016
Apho uya khona… Ndiyakholelwa ukuba olo tshintsho luza kuguqula iziphumo zeshishini ezinxulunyaniswa ne-Twitter. Ngokuqinisekileyo, abayi kukwazi ukuqhayisa ngabasebenzisi abaninzi kunokuba [faka inethiwekhi yoluntu apha], kodwa iya kubuyisa uthando kunye nokuxabisa iqonga lonxibelelwano elifutshane eliguqule i-Intanethi.
I-36% yabathengisi ifumene umthengi nge-Twitter
Ke i-brand isebenzisa njani i-Twitter ngokufanelekileyo? I-Follow.com iphuhlise le infographic ukuze uqhube ukuzibandakanya okukhulu kwaye usebenzise iqonga leziphumo ezandisiweyo zeshishini usebenzisa ezi ndlela zintandathu:
Musa ukoyika nyusa uphawu lwakho Kwi-Twitter njengeakhawunti yayo! Amanqaku anokulandela okukhulu kunabantu ngokomndilili.
Sebenzisa Intengiso ye-Twitter! Unokufaka umthengi wakho okanye uluhlu lwababhalisi kwaye wakhe amaqonga abaphulaphuli ukujolisa kwintengiso yakho kubathengi abakhoyo okanye kubantu abajongeka njengabo.
I-Twitter yi ekuhambeni iqonga, ukubonelela ngethuba elikhethekileyo lokuba unxibelelane nabalandeli abangafuni ukufunda incwadi, bafuna nje isicatshulwa esikhawulezayo, isiqhulo, okanye isiluleko.
Soloko ubandakanya umnxebaNokuba yeyokuphinda ubuye kwakhona, ukhuphele umnxeba, ubize umnxeba, ubhalise, okanye nawuphina omnye umthetho.
Yomeleza uhlaziyo lwakho nge amakhonkco kunye nemifanekiso ngokuzibandakanya okunzulu kunye nokwabelana!
Itegi yexabiso ii-tweets zakho ukuze ufumaneke kuphando. Kwaye qiniseka ukupapasha iiTweets zakho xa abalandeli bakho bekwazi ukumamela (njnempelaveki!). Siphinda iiTweets zethu ngalo lonke ixesha ngokunjalo.
Nantsi i-infographic, Iphepha labasebenzisi be-Twitter lokukhohlisa.
tags: ukunyusa uphawuukukopelakhangela uluhluUkukhuthazwaPhinda ubhaleTwitterUkuzibandakanya kwi-twitterUkuthengisa nge-Twitter
Epreli 17, 2017 ngo-7: 52 AM
I-twitter iba luncedo kakhulu xa isetyenziswa ngokuchanekileyo.
Ndive ukuba isiseko sam somsebenzisi sikhula kakhulu kwinani
Umxholo wam wawufanelekile kwaye unolwazi ngakumbi kumsebenzisi.
enkosi kakhulu ngokuthumela olu lwazi esi sithuba sincedile saphinda saphucula indlela endisebenza ngayo kwi-twitter kwaye siyisebenzisa ngakumbi ngokubanzi